फिल्ममा गरेको अभिनयका लागि करिश्मा मानन्धरले बिरलै चर्चा पाइन् तर फिल्म खेल्दा नपाएको चर्चा उनले नयाँ शक्ति पार्टीमा छिरेपछि पाएकी छिन् ।
‘हिट’ भन्ने शब्दको महत्व केकी अधिकारीलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला र ? १५ वटा फिल्म खेल्दासम्म केकीका कुनै पनि फिल्मले यो शब्द प्रयोग हुने सौभाग्य पाएनन् ।
हास्यकलाकारका नयाँ वर्ष संकल्प
जे गर्दै आइएको छ, त्यही कामलाई निरन्तरता दिने हो र दिइरहने हो । दर्शकको माया र साथ बटुलिरहनु नै हामीजस्ता कलाकारका लागि विशेष संकल्प हो ।
७४ सालमा घुम्न मन लागेको ठाउँ
मलाई घुम्न जान मन लाग्ने र सधैँ जाऊँजाऊँ लागिरहने ठाउँ पोखरा र चितवन हो । २०७४ सालमा पनि त्यहाँ पुगिरहनेछु ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन कसरी सुरु गर्नुहुन्छ ?
नयाँ वर्षको पहिलाे दिन अधिकांश कलाकारहरू फिल्म सुटिङ र प्रमाेसनमा व्यस्त छन्। त्यसबाहेक केही कलाकारहरू नयाँ फिल्मकाे तयारीमा जुटेका छन्।
साल समीक्षा २०७३ : दर्शक हाँसेको वर्ष
यो साल मुनाफा कमाउने फिल्मको विशेषता हेर्दा कमेडी फिल्ममा दर्शकको रुचि ज्यादा रहेको देख्न सकिन्छ ।
‘काजीका कारण झन्डै चुटाइ भेटेको !’
अभिनेता प्रकाश घिमिरेले थुप्रै नाटक र ‘उमा’, ‘टलकजंंग भर्सेस टुल्के’, ‘जात्रा’, पशुपतिप्रशाद’लगायत फिल्ममा उनले अभिनय गरेका छन् ।